हेलिकोप्टर भाडामा लिएर सुत्केरी छोरी र नवजात शिशुको ज्यान बचाए यी बाबुले » खबरहरुको एउटै केन्द्र
हेलिकोप्टर भाडामा लिएर सुत्केरी छोरी र नवजात शिशुको ज्यान बचाए यी बाबुले
बिहीबार, बैशाख १३, २०७५ १५:५६ मा प्रकाशित !
रसुवा– बिहीबार रसुवास्थित जिल्ला अस्पताललाई क्यानडेडियन रेडक्रसले एउटा अत्याधुनिक भवन हस्तान्तरण गर्दै थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जिव थापाले सो नवनिर्मित भवनको उद्घाटन् गरिरहेका थिए । अध्यक्ष थापा सहित क्यानेडियन रेडक्रसका अध्यक्ष गविन गिल्स पनि सो भवन उद्घाटनमा पुगेका थिए । त्यहीबेला एकजना सर्वसाधारण किसान आफ्नी सुत्केरी छोरीलाई एउटा नीजि हेलिकोप्टर भाडामा लिएर थप उपचारका लागि काठमाडौं पठाउँदै थिए ।
स्थानीय सुपा तामाङले नीजि हेलिकोप्टर भाडामा लिएर सुत्केरी भएकी छोरी र नवजात शिशुलाई काठमाडौं पठाइ रहँदा जिल्ला अस्पतालका लागि एउटा नयाँ भवन दातृ निकायले हस्तान्तरण गरिरहेको थियो । तर नयाँ भवन हस्तान्तरण भएपनि तामाङले छोरी र नवजात शिशुको थप उपचारका लागि आवश्यक जन
शक्ति र उपकरण पाएनन् ।
जिल्ला अस्पतालका लागि नयाँ भवन र आवश्यक उपकरण हस्तान्तरण त भइरहेको थियो तर तामाङकी सुत्केरी छोरी र नवजात शिशुले तत्काल त्यसबाट सुविधा लिने सम्भावना कम थियो । त्यसैले सुपाले हेलिकोप्टर भाडामा लिएर उपचारका लागि छोरीलाई काठमाडौं पठाए । सुपाले पाएको दुःख रसुवालीहरुका लागि अन्तिम होस् । तस्विरः रासस
PREVIOUS POST Previous post: अपराधि संग मिलेर प्रहरी संगठनको बदनाम गर्ने किराहरु फाल्ने काम सुरु भई सक्यो -आइजीपी खनाल
NEXT POST Next post: नविना लामाको बिहेमा पाहुना प्रधानमन्त्री देखि बिद्यार्थी कार्यकर्ता सम्म( भिडोयो सहित)
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, बैशाख १३, २०७५ १५:५६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, बैशाख १३, २०७५ १५:५६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, बैशाख १३, २०७५ १५:५६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, बैशाख १३, २०७५ १५:५६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, बैशाख १३, २०७५ १५:५६